Castlọ Zafra | Akụkọ Njem
Foto | Diego Delso Wikipedia
Dabere na mpaghara zoro ezo na obodo Campillo de Dueñas, nke dị na Guadalajara, Zafra Castle guzo na nnukwu okwute. Ebe ewusiri ike nke narị afọ nke iri na abụọ nke rụrụ ọrụ dị mkpa n'oge Spanish Reconquest dịka ọ bụ ọkara n'etiti alaeze nke Aragon na Castile.
Agbanyeghị, ọha mmadụ maara ya n'ihi usoro "Game nke n'ocheeze" dịka ọ bụ ebe a họọrọ ịnọchite anya thelọ Elu nke Ọyụ, ebe amụrụ Jon Snow.
Ma ọ bụ n'ihi na ị hụrụ usoro echiche a n'anya, n'ihi na ọ masịrị gị ụlọ ochie ma ọ bụ maka ebumnuche abụọ a, n'okpuru anyị ga-amụtakwu banyere akụkọ ihe mere eme nke otu n'ime ụlọ ndị mara mma na Guadalajara.
1 Gịnị bụ akụkọ ihe mere eme ya?
2 Otu esi enweta ụlọ nke Zafra?
3 Kedu nleta ndị ọzọ ị ga-eme na mpaghara Molina-Alto Tajo?
3.3 Ogige Nta nke Alto Tajo
Gịnị bụ akụkọ ihe mere eme ya?
Agbanyeghi na odi ndi bu prehistoric, enwere ike kwuo na akuko banyere Castle of Zafra bidoro na mbuso agha Visigoth nke Iberian Peninsula, mgbe onye agha Gothic wepụrụ ebe a pụọ ​​n'aka ndị Rom ma mesịa wuo ebe a siri ike n'etiti Sierra de los Castillejos.
Mgbe e mesịrị ụlọ ahụ dabara n'aka ndị Alakụba na mgbe Eze Alfonso I el Batallador napụtara ya, ọ bụ mgbe ọ nwere oge ịma mma ya. Kemgbe narị afọ nke iri na abụọ ọ dị ugbu a ọ na-eche na ọ kwadoro ndị agha 500 n'oge emepechabeghị.
Castlọ nke Zafra keere na isi dị mkpa nke akụkọ ntolite Spanish dịka nnọchibido nke ndị agha nke Eze Castile Fernando III el Santo nke Gonzalo Pérez de Lara, Lord of Molina, bụ ndị nupụụrụ eze ahụ isi. Ebe obu na enweghi ike imeri ya ma ha enweghi ike iburu ulo eze, eze kwesiri ikwenye na "Concordia de Zafra", nke onwu Don Gonzalo obodo Molina de Aragón ga-abu akuku nke okpueze Castile.
Mgbe njikọ nke alaeze nke Aragon na Castile, nnukwu ụlọ nke Zafra enweghị nnukwu mkpa wee chefuo ọtụtụ narị afọ. Nke a pụtara nnukwu mbibi maka ihe owuwu ya nke mechara jupụta ya na 1971, site na mbọ nke otu agbataobi, Antonio Sanz Polo, enwere ike iwugharị akụkụ nke mgbidi ahụ, ụlọ elu Homage na ụlọ elu Poniente agbakwunyere na n'oké nkume, si otú a na-alọghachi nnukwu ụlọ a n'oge ịma mma ya.
Ọ bụ ugbu a bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke nnukwu ụlọ e chebere na Spain niile, mana enweghị ike ịga leta ime ahụ dịka ụmụ ụmụ Antonio Sanz Polo nwere ya.
Otu esi enweta ụlọ nke Zafra?
Castle Zafra enweghị nnweta dị mfe dịka a na-eme ya site n’okporo ụzọ ndị ọrụ ugbo nke anaghị edebanye aha ma jupụta na okwute ebe naanị ụgbọ ala na-agakarị site n’oge ruo n’oge. GPS dị mkpa iji chọta na-enweta na nnukwu ụlọ na ikwu ala.
Enwere ụzọ abụọ ị ga-esi ruo Castle nke Zafra. Site n'okporo ụzọ GU-417 nke jikọtara Pobo de Dueñas na Campillo na site na obodo Campillo de Dueñas.
Kedu nleta ndị ọzọ ị ga-eme na mpaghara Molina-Alto Tajo?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ebe a iji hụ Castle of Zafra naanị, ebe njem ahụ dị ogologo ma ọ na-esikwa ike ịnweta, ana m akwado ka ị jikọtara nleta ahụ na ụfọdụ akụ dị na mpaghara a nwere gburugburu.
Ọ bụ otu n'ime obodo ndị mara mma nke ochie na Spain na akwa mmiri ochie ya, ụka ya, ebe ndị Juu ya na ezigbo ụlọ nri ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nri Castilian-La Mancha. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ụlọ ọzọ mara mma ma buru ibu na Spain nke a maara dị ka Molina de los Condes ebe e wusiri ike. Echefula ya!
Ọ bụ ọwa mmiri na-asọ asọ nke Osimiri Gallo dị na elu nke obere obodo Corduente, nke bụ akụkụ nke anwansi Alto Tajo Natural Park.
Ogige Nta nke Alto Tajo
Na Alto Tajo Natural Park ị ga-ahụ Spain a na-amaghị ama nwere ọdịdị dị ịtụnanya na àkwà mmiri, lagoons, gorges, monoliths, echiche, ụzọ ụkwụ na ụlọ ime obodo na obodo ndị mara mma dịka Cobeta, Poveda de la Sierra, Checa ma ọ bụ Zaorejas.)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Castlọ Zafra